Izizathu Ezi-8 Icebo Lakho Lokukhokha Ngokuchofoza Liyahluleka | Martech Zone
Izizathu Ezi-8 Icebo Lakho Lokukhokha Ngokuchofoza Liyahluleka
ULwesihlanu, February 6, 2015 Douglas Karr
Le nyanga kuqhubeke Umphetho Womsakazo Wewebhu, sihamba ngamasu wokukhokha ngokuchofoza ngakunye, sixoxa ngamacala okusetshenziswa, futhi sinikeza ngethoni yezibalo nolwazi. Abamakethi babona inani elingakhokhelwa elikhokhelwa ukumaketha ngokuchofoza ngakunye ekwakheni ukuqwashisa lapho ungenalo igunya lokusesha, ukuthola izinkomba, nokuthwebula izethameli ezifanele ezilungele ukuthenga okulandelayo.
Lokho kusho, impendulo ejwayelekile esiyizwa phakathi kwabagxeki be-PPC yile:
O, sizamile i-PPC futhi ayisebenzi.
Sibe sesincipha ekugxileni kulokho okushiwo incazelo wazama is futhi iyaqhubeka nokuthola amaphutha ngamasu asetshenzisiwe. Ngizothembeka ngoba angikaze ngibone iklayenti elilodwa lehluleka ukusebenzisa umholo ngokuchofoza ngakunye lapho imikhankaso ibhekiwe, yenziwa kahle, ihlolwa, futhi ibikwa ngokunembile. Nazi izizathu esizibone iPPC yehluleka:
Ukuzibophezela - Amakhasimende afuna ukuhlola amanzi nge-PPC kepha awafuni ukungena kuwo. Mhlawumbe afuna nje ukheshi isigqebhezana esingu- $ 100 asitholile ngeposi. Kunoma ikuphi, isabelomali sokuqala sincane kakhulu kangangokuba abanakho okwanele ukuhlola inhlanganisela eyanele yamagama asemqoka, ngaphandle kwamatemu angahambisani, futhi bathole imikhondo eyanele yokwenza umqondo wokuthi amaphuzu abo ekhwalithi ayathuthuka nokuthi yimaphi amasu wamagama asemqoka ongawasebenzisa. Ukutshalwa kwemali kwakho kokuqala kudinga ukuba kukhulu ngokwengeziwe kunemali oyilindele nyanga zonke ku-PPC ukuze uvivinye, ulinganise, uthuthukise futhi usethe okulindelwe kuzindleko zakho ngokuhola ngakunye, ikhwalithi yokuhola, nenani lokuguqulwa. I-PPC akuyona umkhankaso owodwa noma iphrojekthi, inqubo engathuthukiswa ngokuhamba kwesikhathi futhi idinga ukuphathwa ngabasebenzi abaqeqeshiwe.
Awekho amakhasi okufika - Uma ngichofoza isikhangiso se-PPC futhi singiletha ekhasini lasekhaya, ngivula amehlo ngokushesha. Ikhasi lakho lasekhaya liyimephu yokuqukethwe kwakho kepha lapho ngenza ukusesha kwami ​​ngikunikeze amagama angukhiye nalokho ebengikufuna. Kufanele ube namakhasi amaningi, uma kungenjalo amakhulu, wamakhasi okugxila esihlokweni kumagama angukhiye owakhombayo!
Izinketho zokuguqulwa - Akuwona wonke umuntu ofuna ukuthenga ngokuchofoza isikhangiso se-PPC. Abanye basheshe bathathe izinqumo futhi bafuna ukwenza ucwaningo. Ukuhlinzeka ngezinketho zokubhalisela, ukulanda iphepha elimhlophe, ukubhalisela ukubonisa, noma ezinye izinketho konke kungukuguqulwa okungashayela umsebenzisi wokusesha abe isivakashi esisebenza kakhulu. Futhi ngoba ababhalisanga akusho ukuthi abayi lapho ngakho-ke udinga ukulandela eminye imisebenzi eholela ekuguqulweni. Uyazi ukuthi mangaki amakhasimende akho aqale ngokulanda iphepha elimhlophe? Noma ukubhaliswa kwe-imeyili? Thola ukuze wenze okunye kwalokhu okunikezwayo kumikhankaso yakho ye-PPC.
Ukulandela umkhankaso omubi - Ngihlale ngimangele lapho izinkampani zinekhasi elilodwa lokufika elivulekele ithrafikhi ephilayo futhi ekhokhelwayo, kepha azinakho ukulandelwa komkhankaso ukuhlukanisa lezi zindawo zazo analytics. Ngamanye amagama, i-PPC kungenzeka ukuthi bekuyisu elihle kakhulu - abakwazi nje ukusho ngokubheka eyabo analytics. Thola i-ejensi ezosiza ukumisa i- analytics kahle ukuze ukwazi ukukala ngokunembile impumelelo yemikhankaso yakho.
Akukho Ukulandelelwa Kwefoni - Wonke amabhizinisi kufanele abe nawo Ukulandelelwa okuhlanganisiwe kwe-Analytics esizeni sabo. Njengoba umhlaba uhamba mobile, baya ngokwanda abantu beqa ukubuka ividiyo noma ukufunda iphepha elimhlophe bamane bashayele inombolo yocingo. Sinamakhasimende ahlukanisa ngephutha imizamo yawo yokumaketha futhi athi zonke izingcingo zivela kwabezindaba bendabuko njengethelevishini nomsakazo. Ngenkathi lawo mangxenye Eshayela izingcingo, siyazi ukuthi imikhankaso yabo yokuchofoza ekhokhelwe nayo ifanelwe isikweletu ngobuningi bethrafikhi yabo yocingo kepha asikwazi ukuyikala baze batshale isixazululo.
Akukho Ukuhlolwa - Ukunamathela ekhasini lokufika kumane akwanele. Umbala wenkinobho noma nokuqondiswa kwamehlo omuntu esithombeni sesitoko kungathinta izinga lokuguqulwa lekhasi lokufika. Ukuhlola Ikhasi Lokufika kuyisici esibucayi sayo yonke imikhankaso yokukhokha ngokuchofoza ngakunye. Kufanele uvivinye zonke izinto ukuze uthuthukise i-CTR kanye ne-ROI yonke yemikhankaso yakho ekhokhelwayo.
Okuqukethwe Okubi - Izikolo zekhwalithi zibandakanya nekhwalithi yokuqukethwe ekhasini lakho lokufika nokuguqulwa kuthinteka ngokuphelele yikhwalithi yolwazi kusayithi lakho lonke. Amaphuzu wezinhlamvu ezimbalwa ngeke awusike. Amavidiyo, ubufakazi, amacala wokusebenzisa, idatha esekelayo, amalogo amaklayenti, isithombe sabasebenzi… okuqukethwe kwakho kudinga ukuphoqa ngokwanele ukuthi isivakashi sithembe ukuthi singathola imininingwane abayidingayo lapho begcwalisa ifomu lakho.
Ukuntuleka Kwemigomo - Muva nje besinethemba lokungena futhi sijabule kakhulu ngokuthi uchaze imigomo - ubefuna ukubuyiselwa okungu-7: 1 emikhankasweni yakhe yokusesha ekhokhelwe. Ukuqonda umgomo, isilinganiso sokuguqulwa, nesikhathi esimaphakathi sokuguqula kusiza i-ejensi yakho ye-PPC ukuthi iqonde uhlobo lwesidingo abadinga ukusikhiqiza, imali okufanele basebenzise ukuhola ngakunye, nobude besikhathi labo abahola abazothatha ukuguqula. Bazokwazi ukulungisa umkhankaso wakho ngokufanele futhi bakusize unqume isabelomali sempumelelo.
Ngibonga u-Erin ku Amasu Esiza ngokuxoxa ngamanye ala macebiso - qiniseka ukungena kuwo Umphetho Womsakazo Wewebhu futhi usilalele ku-Stitcher, BlogTalkRadio, iTunes, Ama-MarketingPodcasts noma yiziphi ezinye iziteshi zokusabalalisa i-podcast!
Tags: umsakazo wewebhu onqenqemeniu-erin izinhlansiamakhasi okufikaisabelomali sokusesha esikhokhiwekukhokhwe amakhasi okusesha okufikaukhokha ngokuchofoza ngokukodwappcisabelomali se-ppcamakhasi wokufika we-ppcamasu amasayithi
Ukwenza ngcono ukusebenza kweMagento nemiphumela yebhizinisi lakho
Ungayiqeda Kanjani Leyo Ndaba ye-Pesky -2 ngama-WordPress Slugs